Lovely Myanmar ⋆ Page 1693 of 2175 ⋆ The Golden Land
By Aung Aung on Wednesday, December 19, 2018
Zawgyi “အပြောအဆိုသတိထား” လို့ သင့်အမေ ဆိုဆုံးမဖူးပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးသိထားခဲ့တဲ့ ဆဲဆိုတာဟာ မကောင်းတဲ့အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဆဲဆိုမှု (စစ်မှန်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဖော်ပြခြင်းလို့လည်းသိရ) က မိမိဟာ ပိုမိုရိုးသားပွင့်လင်းသူလို့ သဘောသက်ရောက်နိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုက ဆိုပါတယ်။ Cambridge တက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေက မကြာသေးမီက လူ ၂၇၆ ယောက်ကို သူတို့ အများဆုံးသုံးဖြစ်တဲ့ ဆဲဆိုစကားတွေနဲ့ သူတို့ ဘယ်လောက်ထိပြောဆို ရေသားသုံးနှုန်းကြသလဲဆိုတာ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ကြောင်း Today ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။ ယင်းစစ်ဆေးမှုအနေနဲ့ မေးမြန်းခံရသူတွေရဲ့ သူတစ်ပါးအပေါ် ပြစ်တင်ဝေဖန်မှု၊ ဂိမ်းဆော့ရာမှာ မသမာသောနည်းကို အသုံးပြုခြင်း၊ သူတပါးကို အသုံးချခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရိုးသားမှုပွင့်လင်းမှုကိုလည်း အကဲဖြတ်တိုင်းတာခဲ့ပါတယ်။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာက အပြောကြမ်းသူတွေဟာ မုသားဆိုမှု အနည်းဆုံးဆိုတာပါပဲ။ ဒါကို လေ့လာမှုပြုလုပ်တဲ့ နည်းလမ်း …
ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပေါင်းစုံ ပြိုင်ပွဲများတွင် အမှတ်မထင် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ရဲသွေးနီ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်မှ စတင်၍ One Championship ပြိုင်ပွဲများ လာရောက်ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံသား ကစားသမားများ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာမှ ကိုယ်ခံပညာကစားသမားများ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာကိုယ်ခံပညာကစားသမားများအနက် အမေရိကနိုင်ငံတွင် ကစားခဲ့ဖူးသည့် အောင်လအန်ဆန်မှ လွဲ၍ ကျန်ကစားသမားများမှာ One Championship ပြိုင်ပွဲကြောင့် ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပေါင်းစုံ ကစားသမား ဖြစ်လာကြသူများဟု ဆိုနိုင်သည် အများစုမှာ ရိုးရာလက်ဝှေ့ ကစားသမားများ ဖြစ်ကြသဖြင့် ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပေါင်းစုံပညာရပ်၏ နည်းစနစ်များကို အကျွမ်းတဝင် မရှိသော်လည်း ကိုယ်ခံပညာအားကစားနှင့် အလှမ်းဝေးသူများတော့ မဟုတ်ကြပေ။ ယင်းကစားသမားများထဲတွင် ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပေါင်းစုံ ပြိုင်ပွဲပေါင်း ၅ ပွဲအထိ ယှဉ်ပြိုင်ထားသူ ရဲသွေးနီသည်လည်း တစ်ဦး အပါအဝင် ဖြစ်သည်။အရင်က ကျွန်တော် ရိုးရာလက်ဝှေ့ပဲ ထိုးတယ်။ အစက …
မိန်းမ ဦးရေများလွန်းတာကြောင့် ယောကျာ်းတယောက်မှာ ရည်းစား ၃ ယောက်စီရှိတဲ့မြို့
တစ်လင်တစ်မယားဓလေ့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်း ရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်လို ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တစ်နေရာက တစ်မြို့ ကတော့ အဆိုပါ ဓလေ့ ကို ချောင်ထဲ ထိုးထားလျက်ရှိပါတယ်။ Dongguan ဆိုတဲ့ မြို့ မှာ မိန်းမဦးရေ အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့် ယောက်ျားအများစုဟာ မိန်းကလေးရည်းစား နှစ်ယောက်၊သုံးယောက် အနည်းဆုံးရှိကြပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၊ Guangdong စီရင်စုက Dongguan မြို့ ဟာ iPhone နဲ့ iPad လို နာမည်ကြီး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် နာမည်ကြီးတဲ့ မြို့ တော်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း စက်ရုံတွေဟာ ယောင်္ကျားတွေဟာ စိတ်ချအားကိုးလို့ မရဘူးဆိုကာ မိန်းမတွေကိုသာ စက်ရုံမှာ အဓိက ခန့် ထားလျက်ရှိပါတယ်။ …
ရှိသမျှခွန်အားလေးတွေနဲ့အတူ ပြန်လည်ချီတက်လာမယ် ဆိုတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာ အခိုင်အမာရရှိပြီး ပရိသတ်ချစ်ခင်မှုရနေမှ အနုပညာလောက ကနေ အချိန်အတော်ကြာ အနားယူသွားခဲ့တဲ့ အေသင်ချိုဆွေဟာ Single Mother တစ်ယောက် အဖြစ် ပရိသတ်ရှေ့ကို ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အပေါ် ပရိသတ် တွေအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးမီကမှ မီဒီယာတွေရှေ့ကိုထွက်ပြီး သူမ သမီးလေးကို တူမလေးလို့ ပြောမထွက်တာကြောင့် အမှန်တိုင်းပရိသတ်ရှေ့ကို ချပြခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် အနုပညာရှင်တွေ တော်တော်များများကတော့ သူမဟာ ရဲရင့်ပြီး လူသားပီသတဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်လို အားပေးစကားပြောခဲ့ကြပါသေးတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ အေသင်တစ်ယောက် ” ကျွန်မအတွက် ခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့ပြန်လည်ချီတက်လာခြင်းပါ ။ ကျွန်မပုံစံကကြည့်လိုက်ရင် ထက်သလိုလို ချေသလိုလိုနဲ့ တကယ်တော့ ကျွန်မ တော်တော်လေးကို ဝေးပါတယ် ” …
အတုဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး ဝယ်လိုက်ပေမယ့် အတုဖြစ်နေတာမျိုးလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ Brand အတုအစစ် ခွဲခြားတတ်အောင်၊ အလိမ်မခံရအောင်ရည်ရွယ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အတု၊ အစစ်ခွဲခြားနည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ပလတ်စတစ်လောင်းထားပုံ ဖုန်းရဲ့ဘူးကိုလောင်းထားတဲ့ ပလတ်စတစ်ကို မဖောက်ခင်မှာ သေချာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပလတ်စတစ်ဟာ လုံးဝကိုလျော့ရဲမနေပဲ ကျစ်လျစ်ပြီး ကွက်တိဖြစ်နေရမှာပါ။ ထောင့်တွေကိုလည်း ပိတ်ထားမထား သေချာလိုက်ပြီး အကဲခတ်ကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ စိတ်မကျေနပ်စရာ၊ လျော့တိလျော့ရဲဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရင်တော့ ဒါဟာ အစစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ (၂) အညွှန်း ဖုန်းရဲ့ဘူးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သုံးစွဲသူအတွက် အညွှန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးဝမပါပဲ သင်နားမလည်တဲ့ စာတွေချည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ် ဒါဟာ အတု၊ ဒါမှမဟုတ် ပုံတူကူးချထားတဲ့ Brand တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ (၃) …
ယနေ့လေးမှာ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကပ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်ခင်ရူပ
အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်ဒယ်မလေးခင်ရူပကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့သဘောကျနှစ်သက်ခြင်းကိုခံထားရသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်ရူပကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့ကချစ်ရသူနဲ့လက်ထပ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ဒီနေ့လေးမှာတော့မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးအလှူပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်ရူပရဲ့မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးလေးကိုတော့ချစ်ရခင်ရတဲ့အနုပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်နော်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုစည်သူအောင်နဲ့မော်ဒယ်ခင်ရူပတို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးအလှူမှပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ခင်ရူပရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ယွန်းမှီမှီကျော်ကလည်းသူငယ်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပွဲမှပုံရိပ်တွေနဲ့အတူ ဂုဏ်ပြုစကားတွေလည်း ဆိုပေးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မော်ဒယ်မလေးခင်ရူပကတော့သူမနဲ့၅နှစ်ကျော်ကြာအတူရှိနေပေးခဲ့တဲ့ချစ်သူနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီး၊ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ၁၉ရက်နေ့မှာတော့မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးအလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေလည်းချစ်ရသူနဲ့ရွှေလက်တွဲသွားတဲ့ခင်ရူပတစ်ယောက်နောင်လာမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။ CRD-momolay UNICODE အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့မျောဒယျမလေးခငျရူပကတော့ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့မကျြနှာလေးကိုပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ပရိသတျတှရေဲ့သဘောကနြှဈသကျခွငျးကိုခံထားရသူလေးပဲဖွဈပါတယျ။ခငျရူပကတော့ပွီးခဲ့တဲ့နိုဝငျဘာလ၃၀ရကျနကေ့ခဈြရသူနဲ့လကျထပျလကျမှတျထိုးခဲ့တာဖွဈပွီး၊ဒီနလေ့ေးမှာတော့မင်ျဂလာဦးဆှမျးကြှေးအလှူပွုလုပျခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ခငျရူပရဲ့မင်ျဂလာဦးဆှမျးကြှေးလေးကိုတော့ခဈြရခငျရတဲ့အနုပညာရှငျတှလေညျးတကျရောကျခဲ့ကွတာတှရေ့ပါတယျနျော။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျကိုစညျသူအောငျနဲ့မျောဒယျခငျရူပတို့ရဲ့မင်ျဂလာဦးဆှမျးကြှေးအလှူမှပုံရိပျလေးတှကေိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ခငျရူပရဲ့အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးတဈဦးဖွဈတဲ့ယှနျးမှီမှီကြျောကလညျးသူငယျခငျြးရဲ့မင်ျဂလာဆှမျးကြှေးပှဲမှပုံရိပျတှနေဲ့အတူ ဂုဏျပွုစကားတှလေညျး ဆိုပေးခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ။ အရမျးကိုခဈြစရာကောငျးတဲ့မျောဒယျမလေးခငျရူပကတော့သူမနဲ့၅နှဈကြျောကွာအတူရှိနပေေးခဲ့တဲ့ခဈြသူနဲ့ပွီးခဲ့တဲ့နိုဝငျဘာလ၃၀ရကျနမှေ့ာမင်ျဂလာလကျမှတျထိုးခဲ့ကွပွီး၊ဒီနဒေီ့ဇငျဘာလ၁၉ရကျနမှေ့ာတော့မင်ျဂလာဦးဆှမျးကြှေးအလှူလေးပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။ခဈြပရိသတျတှလေညျးခဈြရသူနဲ့ရှလေကျတှဲသှားတဲ့ခငျရူပတဈယောကျနောငျလာမယျ့နှဈပေါငျးမြားစှာပြျောရှငျအေးခမျြးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျကွပါဦးနျော။
စင်ပေါ်မှာ ဦးဆောင်ပြီး ကွေးနေအောင်ကခဲ့ကြတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့ စွမ်းပြည့်အောင်တို့ရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယို
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဖွဲ့လုံးကတော့ ပွဲတစ်ခုမှာ သီဆိုဖျော်ဖြေရင်း အားပါးတရ ကခဲ့ကြတာပါ။ အဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပရိသတ်တွေအားပေးမှုအများဆုံးလို့ပြောရမယ့် မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲဟာ နှစ်စဉ်လိုလို အဆိုရှင်တွေ မွေးဖွားပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေပါ ပါဝင်အကဲဖြတ်ခွင့်ရှိတဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို အကြိတ်အနယ်ဂယက်ထခဲ့တဲ့ ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါ Season3မှာတော့ အဆိုရှင် (၁၁) ဦးကိုမွေးဖွားခဲ့ပေးပြီးတော့ သူတို့တွေဟာ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုရှင်တွေဖြစ်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ကို ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတွေမှာလည်း သီဆိုဖျော်ဖြေနေကြပြီဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အောင်မြင်မှုတွေကိုယ်စီရရှိအောင် ကြိုးစားနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။Shwe FM (၉) နှစ်ပြည့်ပွဲမှာလည်း ပြိုင်ပွဲဝင် (၁၁) ယောက်လုံးရဲ့ အားပါးတရဖျော်ဖြေမှုတွေကို ပရိသတ်ကြီးလည်း တွေ့မြင်ခံစားခဲ့ရပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ class=”N5qyRwNb” style=”margin:0px0px20px; padding:0px; border:0px; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-variant-numeric:inherit; font-weight:normal; font-stretch:inherit; font-size:14px; line-height:inherit; …
အေးချမ်းလှတဲ့ ကလောဆောင်းကို ချစ်သူနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
စကားပြောရင်ချွဲချွဲလေးနဲ့အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးချောလေးနန်းဆုရတီစိုးကတော့ရွှေမှုန်တွေစားထားသလားလို့တောင်အထင်မှားရလောက်အောင်တစ်နေ့တစ်ခြားပိုပိုပြီးလှလာသူလေးပါ။သူမကိုအရမ်းချစ်တဲ့ချစ်သူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နန်းဆုရတီစိုးကတော့ လတ်တလောမှာ ချစ်သူနဲ့အတူ ကလောမြို့သို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် အချိန်လေးတွေကိုအတူကုန်ဆုံးခဲ့ကြတာပါ။သာယာလှပတဲ့ရှုခင်းတွေကြားမှာပျော်နေတဲ့GFattနဲ့နန်းဆုတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်တွေကလည်း တကယ့်ကို ကြည်နူးဖွယ် အတိပါပဲနော်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ခရီးထွက်ရင်းပျော်နေကြတဲ့GFattနဲ့နန်းဆုရတီစိုးတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။အမြဲလိုလိုဖက်ရှင်ကျကျဝတ်ဆင်တတ်တဲ့နန်းဆုရတီစိုးကတော့ခရီးသွားတာတောင်အထာကျတဲ့ဖက်ရှင်နဲ့ မိုက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းဆုရတီစိုးကတော့ “နေခြည်တွေခြုံလွှမ်းတဲ့ မနက်ခင်းမှာကလောဆောင်းရဲ့သာယာအေးချမ်းမှုကိုကိုယ်ရသည်??❄️” ကလောရောက်နေတဲ့သူမတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။GFattနဲ့နန်းဆုတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခရီးအတူထွက်လေ့ရှိပြီးမကြာသေးခင်ကလည်းကမ်းခြေကိုအလည်အပတ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ မောင်လေးGFattတို့များမမနန်းဆုကိုချီတာအသာလေးပဲနော်။ လတ်တလောမှာတော့နန်းဆုကသီချင်းအသစ်လေးတွေလုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ချစ်သူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နန်းဆုကတော့အမြဲလိုလိုပျော်နေရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ချစ်ပရိသတ်တွေလည်းကလောမှာပျော်နေတဲ့ G Fatt နဲ့ နန်းဆုရတီတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးကိုချစ်ရင် Share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ CRD-momolay UNICODE စကားပွောရငျခြှဲခြှဲလေးနဲ့အရမျးကိုခဈြစရာကောငျးတဲ့မငျးသမီးခြောလေးနနျးဆုရတီစိုးကတော့ရှမှေုနျတှစေားထားသလားလို့တောငျအထငျမှားရလောကျအောငျတဈနတေ့ဈခွားပိုပိုပွီးလှလာသူလေးပါ။သူမကိုအရမျးခဈြတဲ့ခဈြသူကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့နနျးဆုရတီစိုးကတော့လတျတလောမှာခဈြသူနဲ့အတူကလောမွို့သို့အလညျအပတျရောကျရှိနတောဖွဈပွီးပြျောရှငျကွညျနူးဖှယျအခြိနျလေးတှကေိုအတူကုနျဆုံးခဲ့ကွတာပါ။သာယာလှပတဲ့ရှုခငျးတှကွေားမှာပြျောနတေဲ့GFattနဲ့နနျးဆုတို့ခဈြသူနှဈဦးရဲ့ပုံရိပျတှကေလညျး တကယျ့ကို ကွညျနူးဖှယျ အတိပါပဲနျော။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျခရီးထှကျရငျးပြျောနကွေတဲ့GFattနဲ့နနျးဆုရတီစိုးတို့ခဈြသူနှဈယောကျရဲ့အကွောငျးကိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။အမွဲလိုလိုဖကျရှငျကကြဝြတျဆငျတတျတဲ့နနျးဆုရတီစိုးကတော့ခရီးသှားတာတောငျအထာကတြဲ့ဖကျရှငျနဲ့ မိုကျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ နနျးဆုရတီစိုးကတော့”နခွေညျတှခွေုံလှမျးတဲ့မနကျခငျးမှာကလောဆောငျးရဲ့သာယာအေးခမျြးမှုကိုကိုယျရသညျ??❄️”ကလောရောကျနတေဲ့သူမတို့ရဲ့ပုံရိပျတှကေိုလူမှုကှနျယကျပျေါမှာတငျထားတာတှရေ့ပါတယျ။GFattနဲ့နနျးဆုတို့ခဈြသူနှဈဦးကလညျးမကွာခဏဆိုသလိုသူငယျခငျြးတှနေဲ့ခရီးအတူထှကျလရှေိ့ပွီးမကွာသေးခငျကလညျးကမျးခွကေိုအလညျအပတျသှားခဲ့ပါသေးတယျ။မောငျလေး G Fatt တို့မြား မမနနျးဆုကိုခြီတာ အသာလေးပဲနျော။ လတျတလောမှာတော့နနျးဆုကသီခငျြးအသဈလေးတှလေုပျဖွဈနတေယျလို့သိရပါတယျ။အရမျးခဈြတတျတဲ့ခဈြသူကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့နနျးဆုကတော့အမွဲလိုလိုပြျောနရေတဲ့မိနျးကလေးတဈဦးဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူး။ခဈြပရိသတျတှလေညျးကလောမှာပြျောနတေဲ့ G Fatt နဲ့ နနျးဆုရတီတို့ ခဈြသူနှဈဦးကိုခဈြရငျ Share သှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
၁။ မိမိရဲ့ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကို တည် မိမိရဲ့ ဂြိုဟ်သက်နှင့် ပေါင်းပါ။ ဂြိုဟ်သက်များ ———————- တနင်္ဂနွေ= ၆ တနင်္လာ= ၁၅ အင်္ဂါ= ၈ ဗုဒ္ဓဟူး= ၁၇ ကြာသပတေး= ၁၉ သောကြာ= ၂၁ စနေ= ၁၀ ရာဟု= ၁၂ ၂။ ပေါင်းပြီး ၄၃နဲ့ (÷)ပါ။ ၃။ ရရှိတဲ့ အကြွင်းနဲ့ မိမိရဲ့ အသက်နဲ့ ထပ်ပေါင်းပါ။ မိမိအသက်ဆိုတာ ၂၉ပြည့်ပြီးလျှင် ၃၀လို့ ယူရပါမယ်။ ၄။ ပေါင်းပြီးလျှင် ၇နဲ့ ထပ် (÷)စားပါ။ ရလာတဲ့ အကြွင်းက ၀ကြွင်း၊ ၅ကြွင်းဆို ထီဆုကြီးပေါက်မည်။ ၁ကြွင်း၊ ၆ကြွင်းဆို ထီဆုသေး ဖြစ်မည်။ ထိုသို့ ပေါက်ဖို့အခွင့်ရှိလာလျှင် …
ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်(၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတရားခံပြေး(၂)ဦးအား မြိုင်ကလေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိ ။ ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မဲသောင်ကျေးရွာ အုပ်စု(၁)တွင်မြန်မာလုပ်သားမိသားစုဝင်လေးဦးအားသတ်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ(၂)ဦးအား ဘားအံမြို့နယ် မြိုင်ကလေးရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှစခန်းမှူးရဲအုပ်ဇော်လင်းနယ်ထိန်းဒုတပ်ကြပ် ထွန်းမင်းလတ် ထံသို့ဖားပုကျေးရွာသားများ၏ သတင်းပေးမှု့ကြောင့် ဒီဇင်ဘာ(၁၉)ရက်ညနေ၆နာရီခန့်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အဆိုပါဖမ်းဆီးရမိသူများမှာ အစွယ် မြောက်ဦးမြို့နေသူနှင့် ဇော်ဇော်မင်းပြားမြို့နေသူများဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးရမိသူများအား ဘားအံမြို့မှစခန်းတွင်စစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပြီး အဆိုပါ၂ဦးအနက် လေးလသားခလေးငယ်အား ခြေထောက်ဖြင့်နင်းသတ်ခဲ့သူတဦးပါကြောင်း၎င်းတို့၏အစစ်ခံချက်အရသိရပါတယ်။Ko Ye Gyi အရွှေနှင့်အငယ်ကောင်သည် ယခင်ကလည်း မူးယစ်ရမ်းကားမှုများကြောင့် ရပ်ကွက်လုံခြုံရေးအဖွဲ့များ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရဖူးသူများဖြစ်ပြီး အရွှေနှင့်မထွန်းမေသည်လင်မယားဖြစ်သည်။အိမ်းနီးချင်းများဖြစ်ကြပြီး စကားများရာမှမကျေနပ်သောကြောင့် သေဆုံးသူမိသားစုများအိပ်ပျော်နေစဉ် နံနက် ၁ နာရီကျော်ခန့်က အရွှေနှင့်အပေါင်းပါများက အိမ်ပေါ်သို့တက်လာကာ အိပ်ပျော်နေသူများကို တုတ်ဖြင့် ရိုက်သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းသတင်းများတွင်ဖော် ပြထားသည်။အသတ်ခံရသူ မိသားစုဝင်များမှာ သထုံခရိုင်ကျောက်ရေတွင်းရွာမှ ပအိုဝ့်လူမျိုးများဖြစ်ကြသည့် ကတုံး (၄၅) နှစ် မခင်လှ (၄၀) ပေါဒင်း (၄) နှစ် လေးလသားအရွယ် သားယောင်္ကျေားလေးတဦးတို့ဖြစ်ကြသည်။ လေးလောင်းပြိုင်အသတ်ခံရသည့် …
← Previous 1 … 1,691 1,692 1,693 1,694 1,695 … 2,175 Next →